UN-ka iyo maamulka Juba oo ka wada hadlay shirka dib u heshiisiinta – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
UN-ka iyo maamulka Juba oo ka wada hadlay shirka dib u heshiisiinta
A warsame 10 September 2014 11 September 2014
Mareeg.com:- Qaramada Midoobay iyo maamulka Juba ee fadhigiisu yahay Kismaayo ayaa maanta halkaas uga wada hadlay taageeridda shirka dib u heshiisiinta beelaha Jubooyinka wada dega.
Ku xigeenka ergeyga gaarka ah ee Qarammada Midoobey u qaabbilsan Soomaaliya, Fatiha Serour iyo madaxda maamulka KMG ah ee Jubba ayaa maanta Kismaayo uga wada hadlay sidii loo xoojin lahaa shirka dib u heshiisiinta bulshada Jubbooyinka oo lagu wado in 16-ka bishan lagu qabto magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose.
Madaxweyne ku xigeenka labaad ee maamulka KMG ah ee Jubba, Suldaan Cabdiqaadir Luga-dheere ayaa sheegay in ay wafdiga isla garteen in la xoojiyo nabadda iyo dib u heshiisiinta Jubbooyinka.
Wuxuu tilmaamay in sidoo kale ay isla soo qaadeen sidii dhaqan celin iyo tababarro loogu sameyn lahaa ciidanka maamulka KMG ah ee Jubbaland.
Ku xigeenka ergeyga Qarammada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya, Fatiha Serour ayaa sheegtay in booqashadoodu ay daba socotay booqasho dhawaan ay Kismaayo ku tageen xubno ka tirsan golaha wasiirrada ee Soomaaliya, ayna taageerayaan dadaallada dib u heshiisiineed ee gobollada Jubbooyinka.
Wafdiga ayaa booqday xero ciidan oo ay ku xareysan yihiin ciidanka wasiirkii hore ee gaashaan dhigga ee xukuumaddii KMG aheyd ee Soomaaliya, Col Barre Aadan Shire (Hiiraale) oo dhawaan heshiis la qaatay maamulka KMG ah ee Jubba.
Amiirka cusub ee Alshabaab wuxuu qorsheynayaa inuu beegsado Uganda: Gen Katumba
Dowladda Soomaaliya oo soo bandhigtay diyaarad sawireysa maraakiibta ku kaluumeysta sharci darrada